Madaxda ONLF ma u soo istaagi doonaan doorashada dowlad deegaanka? | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Madaxda ONLF ma u soo istaagi doonaan doorashada dowlad deegaanka?
Hogaamiyaha jabhadda ONLF Maxamed Cumar Cismaan iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan jabhadda ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga oo uu markiisii ugu horreysay gaaray, wuxuuna sheegay iney sii wadi doonaan howlohooda ku saabsan xorriyadda, mideynta iyo horumarinta shacabka.
Mas’uuliyiintan ayaa shalay ka degay magaalo madaxda Itoobiya ee Addis Ababa, halkaasi oo ay kula kulmeen madax ka tirsan dowladda Itoobiya.
Boqollaal ruux oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee magaalada Jigjiga ayaa maanta garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay wafdigaas oo uu qaabilsay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafe Muxumad Cumar.
Qaar ka mid ah shacabka oo ay ku jireen carruur ayaa ku soo labistay dhar uu ku xardhanyahay calamka Jabhadda, oo muddo dheer dagaal kula jirtay dowladda Itoobiya, ka hor inta aysan dhawaan heshiis la saxiixanin.
BBC-da ayey u suurta gashay iney wareysi la yeelato Admiraal Cumar Cismaan, hogaamiyaha ONLF, oo uu ka muuqday dareen aad u farxad badan.
Waxyaabihii uu wariyaha BBC-da Cabdinaasir Xikam weydiiyay waxaa ka mid ahaa tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan imaatinkooda ka dib iyo in ay qorshaha ugu jirto awood qeybsi ay la wadaagaan dowladda hadda jirta iyo iney hoggaanka ONLF isu soo sharrixi doonaan doorashada xigta ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Ugu horreyn Cumar ayaa mahad celin ballaaran u jeediyay dhammaan mas’uuliyiintii iyo shacabkii u sameeyay soo dhaweynta aan loo kala harin isla markaana taageerada u muujiyay.Maamulkan hadda cusub ee dalka Itoobiya hoggaaminaya wuxuu runtii muujiyay astaamo fara badan oo wanaagsan oo yididiilo badan muujinaya. Markii ugu horreysay wuxuu sii daayay dhammaan maxaabiistii dalka ku xirneyd, ka dibna wuxuu ku dhawaaqay in ururradii gobanimo doonka ahaa aysan ahayn ururro argagixiso ah balse ay yihiin kuwo gobanimo doon ah oo xaqooda u diriraya, xaqna ay u leeyihiin iney dalkooda soo gaalan, meeshey doonaanna ay si nabad galyo ah uga marayaan”.
Muxuu Cumar uga jawaabay su’aasha la xiriirtay iney doorasho isu soo taagi doonaan?
Markii ay maanta mas’uuliyiinta ONLF ka dageen garoonka Jigjiga ayuu hoggaamiyahooda wareysi gaar ah siiyay BBC-da, isagoo arrimo badan taabtay.
Su’aal ahayd “Ma laga yaabaa inaad dowladdan wax la wadaagsaan, mase laga yaabaa inaad doorashada dambe u soo istaagtaan”?, ayuu uga jawaabay sidan: “Wixii xuquuq ah ee uu dadkan leeyahay si fiican baan ula wadaagi doonnaa, waxaan dooneynaa umadayadu iney hesho wixii xuquuq ah ee loo baahnaa iney helaan, waxaan raadineynana si nabad galyo ah ayaan ku raadineynaa”.
Dhanka kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumad Cumar ayaa BBC-da la hadlay, xilli uu maanta qaabilay hoggaanka Jabhadda ONLF.
“Dareenkeygu aad iyo aad ayuu u kacsanyahay, sida ay dadka Soomaaliyeed ee meel walba jooga muujinayaan ayuuna la mid yahay, farxad iyo reyn reyn ayaan dareemayaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay in walaaleheen oo muddo 30 sano ka badan deegaanka ka maqnaa ay maanta ku soo laabtaan deegaankoodii, oo ay si nabad galyo ahna u joogaan, waa arrin aad noo farxad galineysa”, ayuu yiri Madaxweyne Mustafe.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay iney hadda wixii ka dambeeya iskaashi sameyn doonaan. “Gacmo wadajir bey wax ku gooyaan, kala qeybsanaantii iyo tafaraaruqii jiray wuxuu sahlay in umaddan si aan caadi ahayn loo dulleeyo oo loo dhibaateeyo. Waxaan aaminsannahay in haddii is afgarad laga gaaro jihada siyaasadeed ee soo socota, iyadoo marxalad cusub Itoobiya ay gashay, si qoomiyad ahaan ahna loo fikiro, in horumar iyo baraaro iyo xorriyad iyo wanaag fara badan shacabkeenna ay u horseedi doonto, loogana soo kaban doono dhibaatooyinkii baahsanaa ee shacabkan soo gaaray muddadii 60-ka sano ka badneyd”.
Mustafe Muxumad Cumar ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin dhayidda boogihii horay u gaaray Jabhadda ONLF, waxyaabaha ay u qaban doonto dowladdiisana ay ka mid tahay in dib u dajin loo sameeyo dadkii waxyeelladu ka soo gaartay colaaddii wakhtiga dheer qaadatay.
“Dowladda deegaanka iyo tan Federaalkaba waxay isku waafaqsanyihiin inaan gacan qabanno oo taageerno dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay halgankii dheeraa, taasina waa siyaasadda dowladda aan anigu hadda hogaaminayo”, ayuu yiri.
Imaatinka hoggaanka ONLF ayaa daba socday markii dhawaan ay magaalada Jigjiga gaareen saraakiishii iyo ciidamadii ONLF ee dagaalka ku jiray.
Previous articleUrurka Midowga Afrika oo ka digay xiisad ka soo cusboonaata Burundi
Next articleDaawo Sawirada :- Amiir Maxamed Bin Salmaan oo lagu bah-dilay shirkii G-20